ပိတျရကျ တဈရကျ တိုးပေးတဲ့ စမျးသပျမှု ပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ထုတျလုပျမှုစှမျးအား ၄၀% တိုးလာခဲ့တဲ့ မိုကျခရိုဆော့ဖျဂပြနျ - Lifestyle Myanmar
Home News ပိတျရကျ တဈရကျ တိုးပေးတဲ့ စမျးသပျမှု ပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ထုတျလုပျမှုစှမျးအား ၄၀% တိုးလာခဲ့တဲ့ မိုကျခရိုဆော့ဖျဂပြနျ
ယခုနှဈ သွဂုတျလမှာ မိုကျခရိုဆော့ဂပြနျက သူတို့ရဲ့ အလုပျသမားအကုနျလုံးအတှကျ အလုပျလုပျရကျ (၄)ရကျ စမျးသပျမှုဖွငျ့ “Work-Life Choice Challenge Summer 2019” လို့ချေါတဲ့ စမျးသပျမှုတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံရှိ မိုကျခရိုဆော့ကုမ်ပဏီဟာ ဝနျထမျးပေါငျး ၂၃၀၀ခနျ့ကို နှဈပတျလညျခှငျ့ရကျတှေ ပယျဖကျြတာ၊ လစာလြှော့တာ မရှိဘဲ သောကွာနေ့ ၅ရကျကို ပိတျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီစမျးသပျမှုဟာ ဝနျထမျးတှကေို ကနြေပျစခေဲ့သလို ကုနျထုတျစှမျးအား ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးနီးပါးခနျ့ တိုးတတျလာခွငျးဖွငျ့ ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှု ဖွဈကွောငျး သကျသပွေခဲ့ပါတယျ။ (ဝနျထမျး ၉၂.၁ ရာခိုငျနှုနျးဟာ သူတို့ရဲ့ တိုတောငျးတဲ့ အလုပျရကျကို သဘောကကြွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
” အခြိနျတိုတိုလုပျပါ။ အနားယူပွီး အမြားကွီးလလေ့ာပါ။” ဒါက လုပျငနျးခှငျမှာ ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုရှိပွီး သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျရှယျခကျြတှကေို ခံစားခှငျ့ပေးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြတဈခု ရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောက ဝနျထမျးတှကေို အလုပျခြိနျ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျး လြှော့ခပြွီး တူညီတဲ့ ရလဒျတှေ ဘယျလိုရနိငျမလဲဆိုတာ စဉျးစားစခေငျြပါတယျလို့ မိုကျခရိုဆော့ဖျ ဂပြနျဥက်ကဌ နှငျ့ စီအီးအိုဖွဈသူ Takuya Hirano ကပွောပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှမှော အလုပျလုပျရကျ ၅ရကျဟာ တိုတောငျးတဲ့ အလုပျလုပျရကျလို ထိရောကျမှုမရှိကွောငျး ထပျခါထပျခါ သကျသပွေနသေျောလညျး တဈကမ်ဘာလုံးက အလုပျယဉျကြေးမှုမှာ နကျရှိုငျးစှာ အမွဈတှယျနပေါတယျ။ ၁၈ရာခုနှောငျးပိုငျးတှငျ စကျရုံတှဟော ၂၄/၇ လညျပတျဖို့ လိုအပျတာကွောငျ့ အလုပျခြိနျ ၁၀နာရီမှ ၁၆ နာရီအထိကို ပုံမှနျအလုပျခြိနျလို့ သတျမှတျခဲ့ကွပါတယျ။ ယနတှေ့ငျ တဈပတျမှာ ၅ရကျ ၊ တဈနေ့ ရှဈနာရီဟာ ပုံမှနျအလုပျရကျ ဖွဈပါတယျ။
သို့သျော မိုကျခရိုဆော ဂပြနျအပါအဝငျ ကုမ်ပဏီမြားနှငျ့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ပုံမှနျအလုပျခြိနျကို ပွနျလညျစဉျးစားနကွေပါတယျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အလုပျသမား အဖှဲ့ခြုပျက ဖျောပွခဲ့သညျမှာ အခြိနျပွညျ့ အလုပျလုပျရတဲ့ အခြိနျကို လြှော့ခခြွငျးဟာ လုပျသား၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးအတှကျ ရလဒျကောငျးတှေ ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
လုပျခနျးခှငျ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှေ လြော့နညျးသှားခွငျးနှငျ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုစရိတျတှေ လြော့နညျးခွငျး၊ အလုပျပိုကောငျးလာခွငျး၊ အလုပျနှငျ့ ဘဝ ဟနျခကျြညီလာခွငျး၊ အလုပျသမားတှအေတှကျ စိတျကနြေပျမှု၊ စိတျအားထကျသနျမှု ပိုရလာခွငျး စတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အလုပျခြိနျတိုတောငျးခွငျးဟာ စီးပှားရေး “greening”ဖွဈဖို့အတှကျ အရေးကွီးသော ပံ့ပိုးမှုမြားကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အလုပျလုပျတဲ့ ရကျပေါငျးမြားစှာကို လြှော့ခလြိုကျတာကွောငျ့ အိမျကနေ အလုပျနရောကို ပုံမှနျအသှားအပွနျလုပျရမယျ့ အကွိမျအရအေတှကျ ကလညျး ပတျဝနျးကငျြအပျေါ ကောငျးကြိုး သကျရောကျစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အလုပျရကျ ၄ရကျနှငျ့ အံကိုကျဖွဈစဖေို့ မိုကျခရိုဆော့ ဂပြနျက အစညျးအဝေးခြိနျတှကေို လြှော့ခခြွငျးနှငျ့ အဝေးမှ ပွုလုပျခွငျးတို့ကို ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ပိတျရကျ သုံးရကျက ကုနျထုတျစှမျးအား ၃၉.၉ ရာခိုငျနှုနျးကို တိုးလာစယေုံသာမက ဝနျထမျးမြားအနဖွေငျ့ အခြိနျ၂၅. ၄ရာခိုငျနှုနျးကို လြော့နညျးစခေဲ့ပါတယျ။ လြှပျစဈဓါတျအား ၂၃.၁ရာခိုငျနှုနျးကို လြှော့ခခြဲ့နိုငျပါတယျ။ အလုပျပိတျရကျ တာရှညျတာက ဝနျထမျးမြားနှငျ့ သူတို့ရဲ့ ကောငျးကြိုးခမျြးသာအတှကျ ပိုကောငျးယုံသာမက အရငျးအမွဈနညျးပါးတာကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြအတှကျလညျး ပိုကောငျးစပေါတယျ။
ပိတ်ရက် တစ်ရက် တိုးပေးတဲ့ စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ၄၀% တိုးလာခဲ့တဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဂျပန်
ယခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ မိုက်ခရိုဆော့ဂျပန်က သူတို့ရဲ့ အလုပ်သမားအကုန်လုံးအတွက် အလုပ်လုပ်ရက် (၄)ရက် စမ်းသပ်မှုဖြင့် “Work-Life Choice Challenge Summer 2019” လို့ခေါ်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မိုက်ခရိုဆော့ကုမ္ပဏီဟာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၃၀၀ခန့်ကို နှစ်ပတ်လည်ခွင့်ရက်တွေ ပယ်ဖျက်တာ၊ လစာလျှော့တာ မရှိဘဲ သောကြာနေ့ ၅ရက်ကို ပိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို ကျေနပ်စေခဲ့သလို ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးခန့် တိုးတတ်လာခြင်းဖြင့် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ (ဝန်ထမ်း ၉၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သူတို့ရဲ့ တိုးတောင်းတဲ့ အလုပ်ရက်ကို သဘောကျကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
” အချိန်တိုတိုလုပ်ပါ။ အနားယူပြီး အများကြီးလေ့လာပါ။” ဒါက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိပြီး သင့်ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ခံစားခွင့်ပေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ချိန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပြီး တူညီတဲ့ ရလဒ်တွေ ဘယ်လိုရနိင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်လို့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဂျပန်ဥက္ကဌ နှင့် စီအီးအိုဖြစ်သူ Takuya Hirano ကပြောပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရက် ၅ရက်ဟာ တိုတောင်းတဲ့ အလုပ်လုပ်ရက်လို ထိရောက်မှုမရှိကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ သက်သေပြနေသော်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက အလုပ်ယဉ်ကျေးမှုမှာ နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ ၁၈ရာခုနှောင်းပိုင်းတွင် စက်ရုံတွေဟာ ၂၄/၇ လည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် အလုပ်ချိန် ၁၀နာရီမှ ၁၆ နာရီအထိကို ပုံမှန်အလုပ်ချိန်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယနေ့တွင် တစ်ပတ်မှာ ၅ရက် ၊ တစ်နေ့ ရှစ်နာရီဟာ ပုံမှန်အလုပ်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် မိုက်ခရိုဆော ဂျပန်အပါအဝင် ကုမ္ပဏီများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များက ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားနေကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်က ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်ကို လျှော့ချခြင်းဟာ လုပ်သား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ခန်းခွင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစရိတ်တွေ လျော့နည်းခြင်း၊ အလုပ်ပိုကောင်းလာခြင်း၊ အလုပ်နှင့် ဘဝ ဟန်ချက်ညီလာခြင်း၊ အလုပ်သမားတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု ပိုရလာခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလုပ်ချိန်တိုတောင်းခြင်းဟာ စီးပွားရေး “greening”ဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးသော ပံ့ပိုးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာကို လျှော့ချလိုက်တာကြောင့် အိမ်ကနေ အလုပ်နေရာကို ပုံမှန်အသွားအပြန်လုပ်ရမယ့် အကြိမ်အရေအတွက် ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုး သက်ရောက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလုပ်ရက် ၄ရက်နှင့် အံကိုက်ဖြစ်စေဖို့ မိုက်ခရိုဆော့ ဂျပန်က အစည်းအဝေးချိန်တွေကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အဝေးမှ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပိတ်ရက် သုံးရက်က ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ၃၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းကို တိုးလာစေယုံသာမက ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အချိန်၂၅. ၄ရာခိုင်နှုန်းကို လျော့နည်းစေခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၂၃.၁ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ပိတ်ရက် တာရှည်တာက ဝန်ထမ်းများနှင့် သူတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် ပိုကောင်းယုံသာမက အရင်းအမြစ်နည်းပါးတာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း ပိုကောင်းစေပါတယ်။
Previous articleတရုတျနှငျ့ ကိုရီးယား တီဗီစီးရီးတှကေို ပွနျရိုကျထားတဲ့ ထိုငျးတီဗီဇာတျလမျးတှဲ (၁၀)ကား
Next articleကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ အိပျရာဝငျခြိနျ သောကျပေးနိုငျတဲ့ ဖြျောရညျ (5)မြိုး